Hamstring Injury (ဒူးကောက်ခွက်အကြော ဒဏ်ရာ) - Hello Sayarwon
Hamstring Injury (ဒူးကောက်ခွက်အကြော ဒဏ်ရာ)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Hamstring Injury (ဒူးကောက်ခွက်အကြော ဒဏ်ရာ)
Hamstring Injury (ဒူးကောက်ခွက်အကြော ဒဏ်ရာ) ကဘာလဲ။
ဒူးကောက်ခွက်အကြောဒဏ်ရာဆိုတာ ဒူးကောက်ခွက်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားများ တင်းလွန်းခြင်း သို့ အားစိုက်လွန်းခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတယ် ။ ဒူးကောက်ခွက်ကြွက်သားပျက်ဆီးမှုပေါ်မူတည်ပြီး ဒဏ်ရာကို အဆင့်၃ဆင့်ခွဲခြားနိုင်တယ်။
အဆင့်၁ ။ ကြွက်သားနာကျင်ခြင်း
အဆင့်၂ ။ ကြွက်သားတချို့စုတ်ပြဲခြင်း
Hamstring Injury (ဒူးကောက်ခွက်အကြော ဒဏ်ရာ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒူးကောက်ခွက်ကြောဒဏ်ရာက များသောအားဖြင့် ပြင်းထန်တဲ့အားကစားလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလုပ်တဲ့ အားကစားသမားတွေမှာအဖြစ်များတယ်။ ဥပမာ..အပြေးသမား၊ း၊ တာတိုအပြေးသမား၊ ဘောလုံးသမား၊ ဘက်စကတ်ဘောသမား။ သင်ဟာ ဒီအခြေအနေတွေကို လေ့လာခြင်းဖြင့် ဒဏ်ရာရနိုင်ခြေကို လျှော့ချနိုင်တယ်။ ထပ်မံသိလိုသော အချက်များရှိပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Hamstring Injury (ဒူးကောက်ခွက်အကြော ဒဏ်ရာ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ဒူးကောက်ခွက်အကြောဒဏ်ရာရဲ့ လက္ခဏာတွေက ဒဏ်ရာပြင်းထန်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲမှုရှိတတ်ပါတယ်။
သင်၏ပေါင်အနောက်ဘက်၌ အနည်းငယ်နာကျင်ခြင်းနှင့် ခြေထောက်လှုပ်ရှားရာတွင် အနည်းငယ်ခက်ခဲခြင်းတို့ကိုတွေ့ရနိုင်တယ်။ ဒူးကောက်ခွက်ကြွက်သားအနည်းငယ်ဆုတ်ပြဲသွားပါကလည်း ပေါင်အနောက်ဘက်ပိုင်းနာကျင်ခြင်းနှင့် ခြေထောက်လှုပ်ရှားရခက်ခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်တယ်။
နာကျင်မှုကိုပိုမိုခံစားရနိုင်တယ်။ တချို့သောအခြေအနေတွင် ပေါင်အနောက်ဘက်မှာယောင်နေတာမျိုး၊ အညိုအမဲစွဲနေတာမျိုး ဖြစ်တတ်တယ်။
သင့်အနေနှင့် အလွန်ဆိုးရွားသောနာကျင်မှုနှင့်အတူ ညိုမဲစွဲယောင်ယမ်းခြင်းတို့ကိုလည်း တွေ့ရနိုင်တယ်။ ဒဏ်ရာရထားတဲ့ခြေထောက်ဟာသန်စွမ်းမှုအားနည်းပြီး ခြေထောက်ကိုမသုံးနိုင်ဘဲဖြစ်နေမယ်။
အပေါ်မှာမဖော်ပြထားတဲ့ အချက်တွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာအကြောင်း ထပ်မံသိရှိလိုလျှင် ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးပါ။
ကြွက်သားအနည်းငယ်ထိခိုက်မှုကို အိမ်တွင်းကုသနည်းများနှင့် ကုသလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခြေထောက်မထောက်နိုင်တော့ရင်၊ ခြေလှမ်းလှမ်းတိုင်းနာကျင်လို့ လမ်းမလျှောက်နိုင်ရင် ဆရာဝန်နှင့်ပြသသင့်ပါတယ်။
Hamstring Injury (ဒူးကောက်ခွက်အကြော ဒဏ်ရာ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဒူးကောက်ကွက်အကြောကို သူတတ်နိုင်တဲ့ပမာဏထက်ပိုပြီး ဆွဲဆန့်လိုက်မိရင် ဒဏ်ရာရနိုင်တယ်။
အားကစားသမားတွေက ဒဏ်ရာရဖို့ အခွင့်အလမ်းများတယ်။ သို့သော် လူတိုင်းဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။ သင်ဟာ ရုတ်တရက်အားကစားတစ်ခုခုကို ကစားတဲ့အခါ၊ပြင်းပြင်ထန်ထန်လှုပ်ရှားတဲ့အခါ(ဥပမာ ခုန်ခြင်း၊ရှေ့ကိုဆတ်ခနဲလှန်းခြင်းတို့လို ကြွက်သားဆန့်ထုတ်ရတဲ့အခါ) ဒူးကောက်ခွက်မှာ ဒဏ်ရာရသွားနိုင်တယ်။
Hamstring Injury (ဒူးကောက်ခွက်အကြော ဒဏ်ရာ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Hamstring Injury (ဒူးကောက်ခွက်အကြော ဒဏ်ရာ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်မှ သင့်လှုပ်ရှားမှု၊ ပေါင်မှာယောင်ယမ်းနေမှု၊ အညိုအမဲစွဲမှုတို့ကိ ုကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်တယ်။ ထို့ပြင် ဒဏ်ရာရနေတဲ့ ကြွက်သား (သို့)အရွတ်ရဲ့နေရာကိုသိရန်အတွက် လိုအပ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေ သင့်ကိုလုပ်ခိုင်းလိမ့်မယ်။
အရမ်းဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေမှာ ဆရာဝန်က ဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုအသုံးပြု ပြီး သင့်အရိုးတွေ ကြွက်သားတွေပျက်ဆီးမှုကို ရှာဖွေလိမ့်မယ်။
Hamstring Injury (ဒူးကောက်ခွက်အကြော ဒဏ်ရာ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဆရာဝန်မှ သင့် ဒဏ်ရာနှင့် ယောင်ယမ်းခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေရန် အောက်ပါနည်းလမ်းတွေနှင့် ကုသပေးလိမ့်မယ်။
ချိုင်းထောက် သို့ ကုလားထိုင်ကိုသုံးပြီး ဒဏ်ရာရတဲ့ခြေထောက်အပေါ် မတ်တပ်ရပ်ခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးခြင်း
အကယ်၍ သင့်ဒူးကောက်ခွက်ကြွက်သား အနေအထားပျက်သွားလျှင် ခွဲစိတ်၍ကြွက်သားအစားထိုးခြင်း သို့မဟုတ် ပြဲနေသောကြွက်သားကိုပြန်ပြင်ခြင်းတို့ကို လုပ်နိုင်တယ်။
Hamstring injury. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hamstring- injury/basics/lifestyle-home-remedies/con-20035144. Accessed July 22, 2016.
Hamstring injury. . Accessed July 22,
Hamstring injury. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hamstring- injury/basics/risk-factors/con-
20035144 Accessed July 30, 2016.
Hamstring injury. http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=a00408 .Accessed July 30, 2016Hamstring injury. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hamstring- injury/basics/lifestyle-home-remedies/con-20035144. Accessed July 22, 2016.
Hamstring injury. http://www.nhs.uk/conditions/hamstring-injury/Pages/Introduction.aspx. Accessed July 22,
Hamstring injury. http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=a00408 .Accessed July 30, 2016